Kuqhume inganono eMarburg | News24
Kuqhume inganono eMarburg
KUQHUME isibhamu ngasezitolo zaseMarburg ngoMsombuluko odlule, Zibandlela 3. Ilunga lomphakathi elezibonele ngamehlo elingathandanga kudlalulwe igama lalo lithe omunye wabanikazi bezitolo ubejaha abafana ababili ebekade bentshontshe okudliwayo esitolo sakhe.
‘’Umnikazi wesitolo ubejaha abafana laba abantshontshile kodwa wangabafica nokuyilapho avale wakhipha ivolovolo lakhe walikhomba emyeni wabe esedubula phezulu. Shuthi ekuzweni ukuqhuma kwesibhamu babe sebeshiya phansi lezinto abebezithathe esitolo base beqhubeka nokubaleka,” kuchaza umthombo.
Ube eseqhuba ngokuthi lesi isigameko usibukele saze sayophela, “Ngibabukele baze bayosithela abafana bebaleka futhi akukho muntu olimalile ngesikhathi kwenzakala konke lokhu.”
Yize umthombo weFever uthe akukho muntu othintekile ngokuqhunyiswa kwesibhamu, kukhona abahlali bakhona eMarburg abathukile ngokusizwa siqhuma.
Omunye ongathandanga lidalulwe igama lakhe uthe: “Angibonanga kwenzekeni kephi ngisizwile isibhamu sikhala, kungithusile mina loko ngoba sekuyisikhathi sikancibijane, izinto zokudubulana zenzeka kakhulu kulesikhathi sonyaka.’’
Amaphoyisa akulendawo athe alikho icala eselike lavulwa mayelana nesigameko futhi akuzange kubekhona muntu obazisile ngokuqhuma kwesibhamu eMarburg.